काठमाडौँ । सरकारले सन् २०१८ बाट सम्पूर्ण धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा शतप्रतिशत सन्देशमूलक छाप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागेको छ । आजदेखि राजधानीमा सुरु भएको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणक...
देशमा २० हजार पुरुष वेश्या : एकपटक सेवा दिएबापत १० देखि २५ हजारसम्म !
नेपालमा २ लाख यौन व्यवसायी छन् । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २० हजार पुरुष यौन व्यवसायी रहेको सरकारी तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको अध्ययनले देखाएको छ । बाँकी महिला, तेस्रोलिंगी र समलिंगी यौन व्यवसायी...
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा किलिया सेवा
पर्सा । वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा आजदेखि ‘किलिया एनलाइजर’ सेवा सुरु भएको छ । उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिले रु ४० लाखको लागतमा केमो लिमिनिसनस इमोनोएसे मेसिन जडान गरेपछि अस्पतालले किलि...
आनन्दमयी यौन जीवनका लागि केहि सुत्रहरु
अन्धकारमा भन्दा मधुरो प्रकशमा यौन सम्बन्ध राख्दा आनन्दमयी हुन्छ। अझ कहिलेकाहि रगिंन बत्तिमा अझ बढि आनन्द आउनुका साथ फरक अनुभुति हुन्छ। राती सुत्ने बेलामा लाउने पोशाकले पनि यौन जीवनमा निक्कै फरक ल्याउ...
यसरी पिउनुपर्छ पानी
धेरै मानिसले पानी तनतनी पिउने गर्छन् । मुखमा ग्लास पु¥याएपछि ग्लास नरितिञ्जेलसम्म लगातार पानी पिउँछन् । तर, आयुर्वेदका अनुसार पानी सुरुप–सुरुप गरी पिउनुपर्छ । यसरी पानी पिउँदा शरीरलाई फाइदा पुग्ने आयु...
‘दृष्टि आइ केयर केन्द्र’ स्थापना
काठमाडौँ । आँखा उपचारका क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै ‘दृष्टि आइ केयर केन्द्र’ यहाँ स्थित कलङ्कीमा स्थापना भएको छ । दृष्टि विशेषज्ञहरुको क्रियाशीलतामा स्थापना भएको दृष्टि आइ केयर सिस्टमद्वा...
कार्यालय समयमै सेक्स गर्न १ घण्टा विदा !
सेक्स मानव जीवनका लागि अति आवश्यकिय प्रकृया हो जसले सम्बन्ध र प्रेम दुवैलार्इ प्रगाढ बनाउछ । नेपालमा बिवाह अघिको सेक्सलाइ अवैध मानिन्छ । सेक्सकै विषयमा बिश्वमा यस्ता अनौठा अनोठा नियमहरू बनेका छन जो...
सुखी र सन्तुष्ट यौन जीवनका लागि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । यसमा योगको भूमिका प्रमाणित भइसकेको छ । उत्तेजना समस्या, शीघ्रपतन, यौनप्रति उदासीनताजस्ता पुरुष र महिलाका यौन समस्या योगद्...
गर्मी महिनामा छालामा हुने समस्याको समाधानका लागि डा.पद्माका ७ टीप्स
डा. पद्मा तुलाधर गर्मी सुरु भएसँगै छालामा विभिन्न समस्या देखा पर्छन्। घामका कारण छालामा चाया, पोतो, एलर्जी, खटिरा, डन्डिफोर जस्ता समस्या देखा पर्छन्। गर्मीको मौसममा छालामा देखा पर्ने समस्यालाई ...
सेक्स जहिले पनि सुरक्षित रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि सेक्स गर्नेले त विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । असुरक्षित सेक्सका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा कण्डमको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यो नै सबैभन्...
काठमाडौँ । शहर भित्रका युवा किशोर किशोरीहरुका लागि केटा र केटी जोडी बाँधेर डेटिङमा जानु अब करिव सामान्य नै बन्न लागिसक्यो । शहर भित्रका ठाउँहरु र शहर भन्दा बाहिर पनि ‘डेटिङ स्पट’ अर्थात भेटघाट गर्ने स...
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनता स्वास्थ्य केन्द्र (स्वास्थ्य प्रर्वद्वन केन्द्र) खोल्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । स्वास्थ्य परामर्श, आधारभुत स्वास्थ्य से...
तपाईलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? छ भने यो सुत्र प्रयोग गर्नुहोस
एजेन्सी । राम्ररी आरामले चैनले को पो सुत्न चाहदैन ? राम्रो निन्द्रा शरिरको लागि अत्यावश्यक चीज हो । मान्छे यदि राम्ररी सुत्न पाएको छैन भने ऊसको जीवन कष्टकर बनिरहेको हुन्छ । निन्द्राले शरिरलाई आराम दिद...
सेक्स टोयका प्रयोगकर्ता महिला बढी
काठमाडौ। नेपालका संभ्रान्त बर्गमा यौन संतुष्टिका लागि सुरक्षित तथा भरपर्दो माध्यमको रुपमा यतिखेर सेक्स टोय हुन थालेको रहस्य खुलेको छ। काठमाडौ र पोखरामा एकबर्षयता खुलेका सेक्स टोय पसलमा देखिएको भीड तथा...
काठमाडौँ । ‘आपत्कालीन चिकित्सा प्रणाली’ कार्यक्रम अब नेपालमा पनि सुरु गरिएको छ । गत वर्षको भूकम्पमा विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा कसरी दिने भन्ने पहिल्याउन नसक्दा बढी धनजनको क्षति भएकोतर्फ दृष्टिगत गर्...
चितवन । नेपालमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रुपमा हुने गरेको पाइएको छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)ले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा कुल गर्भपतन मध्ये ५८ प्रतिशत असुरक्षि...
के-के हुन महिलाका ३२ लक्षण ?
ओहो कस्ति राम्री ३२ लक्षणले युक्त । विवाह अगाडी जुराउने क्रममा महिलाका विषयमा यस्तै सुनिन्छ । हरेकले ३२ लक्षण भएकी नै महिला खोज्ने गरेका छन् । के के हुन महिलाका ३२ लक्षण ३२ लक्षणहरु १. शरीरको माथिल्...
हरिकला मृत्यू प्रकरणः सिद्धार्थ अस्पतालद्वारा गल्ति स्वीकार
काठमाडौं । जाजरकोटकी हरिकला बुढाको मृत्यु प्रकरणमा नेपालगञ्जको सिद्धार्थ अस्पतालले गल्ति स्वीकार गरेको छ । आफ्नो अस्पतालमै पहिलो पटक चेकजाँच गराउँदा सामान्य त्रुटी भएको हुन सक्ने भन्दै अस्पतालका व्यवस...
सुत्केरी गराउँन पाँच घण्टा पैदल !
करिब ३० बर्ष अघिबाट गाउँ–गाउँमा सुरु भएको स्वाथ्य चौकीमा सेवाग्राहिहरुको चाप बढ्दो क्रममा देखिन्छ । अहिले गाउँमा विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा वर्थीङ सेन्टरहरु पनि सञ्चालनमा छन् । काभ्रेको कर्णाली मानिन...
विश्व क्षयरोग दिवस आज, विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरि मनाईदै
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी आज विश्व क्षयरोग दिवस मनाइँदैछ । हरेक वर्ष मार्च २४ तारिखका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । क्षयरोग माईको ब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामको ब्य...